Google's Antitrust Suit dia tandindon'ny rano madinidinika amin'ny fiovan'ny IDFA an'i Apple | Martech Zone
Raha mbola ho ela, ny fitoriana antitrust an'ny DOJ amin'i Google dia tonga amin'ny fotoana manandanja ho an'ny indostrian'ny teknolojia doka, satria ireo mpivarotra dia miomana amin'ny famonoana an'i Apple. Identifier ho an'ny mpanao dokam-barotra (IDFA) miova. Ary noho ny fiampangana an'i Apple ihany koa tao amin'ny tatitra 449 pejy avy amin'ny Antenimieram-pirenena amerikana ho nanararaotra ny fahefana monopoliany tsirairay avy, dia tsy maintsy nandinika tsara ireo dingana manaraka i Tim Cook.
Azon'ny Apple atao ve ny manaikitra ny dokambarotra ka hahatonga azy io ho andrana teknolojia manaraka? Izany no fanontaniana eritreretin'ny indostrian'ny teknolojia adiresy $ 80 miliara ankehitriny.
Hatramin'izao, Apple Inc. dia toa nikatona teo anelanelan'ny vatolampy sy ny toerana sarotra: nandany vola an-tapitrisany maro izy mba hametrahana ny tenany ho orinasa mifantoka amin'ny tsiambaratelo ho an'ny mpampiasa, ary amin'ny famolavolana soloina ny IDFA, izay vato fehizoro ho an'ny tena dokambarotra niomerika nandritra ny taona maro. Mandritra izany fotoana izany, ny fanafoanana ny IDFA ho tombontsoan'ny SkAdNetwork rafitra mihidy azy manokana, dia hahatonga an'i Apple ho mpilatsaka hofidina ho antitrust.
Na izany aza, tamin'ny fanemorana ny fanovana IDFA tato ho ato ny 2021 Apple dia mbola manam-potoana hanovana ny làlan-kalehany ankehitriny ary hisorohana ny fanarahana ny dian'i Google. Fahendrena ho an'ny goavambe teknolojia ny manamarika ny raharahan'i Google ary na mitazona ny IDFA na manangana ny SkAdNetwork amin'ny fomba tsy hahatonga ny mpanao dokambarotra hiankina tanteraka amin'ny angon-drakitry ny mpampiasa ampihimamba azy.
Amin'ny endriny ankehitriny, Natolotr'i Apple SkAdNetwork toa hetsika lehibe kokoa mankany amin'ny ampihimamba noho izay nataon'i Google tamin'ny sehatry ny fikarohana. Na dia i Google aza no mpilalao lehibe indrindra amin'ny sehatra misy azy, farafaharatsiny, misy milina fikarohana hafa azo ampiasaina malalaka ny mpanjifa. Ny IDFA kosa dia misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana manontolo ho an'ny mpanao dokam-barotra, mpivarotra, mpamatsy angona mpanjifa, ary mpamolavola fampiharana izay tsy manan-tsafidy afa-tsy ny milalao baolina amin'i Apple.
Tsy vao izao i Apple no mampiasa ny tànany ambony hanery ny tsena hanaraka. Tao anatin'izay volana lasa izay, ny mpamorona rindrambaiko dia nanosika ny sandam-bola goavam-be 30% an'i Apple avy amin'ny varotra rehetra natao tao amin'ny fivarotana app - sakana lehibe ho an'ny vola. Orinasa mahomby be toa ny Epic Games ihany no manana fahaizana manenjika ady ara-dalàna amin'ilay goavambe teknolojia. Fa na i Epic aza hatreto dia mbola tsy nahomby tamin'ny fanerena ny tanan'i Apple.
Amin'izao haingana izao, na izany aza, ny fizotry ny antitrust mitohy dia maharitra fotoana maharitra hanatanterahana fiovana misy dikany ho an'ny indostrian'ny doka. Kivy ny mpanonta-gazety satria ny fitoriana an'i Google dia miompana indrindra amin'ny fifanarahana fanaparitahana ny orinasa izay nahatonga azy io ho motera fikarohana tsy mandeha amin'ny laoniny kanefa tsy nahavita namaha ny ahiahin'izy ireo momba ny fanaon'ny orinasa amin'ny fanaovana doka an-tserasera.
Araka ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny manampahefana ao amin'ny fifaninanana UK, 51 cents monja isaky ny 1 dolara lany amin'ny fanaovana doka tonga any amin'ny mpanonta. Ny 49 cents sisa tavela dia lasa etona any amin'ny rojom-pifandraisana nomerika. Mazava fa misy antony mahatonga ny mpitory ho sosotra amin'izany. Ny tranga DOJ dia manazava ny zava-misy henjana amin'ny indostria misy antsika:
Ary ny fitetezana mivoaka ny korontana noforoninay dia ho dingana malemilemy sy miadana ary mandreraka. Na dia nandray ny dingana voalohany tamin'ny Google aza ny DOJ dia azo antoka fa manana ny fahitany azy koa i Apple. Raha te-ho eo amin'ny lafiny ankavanan'ity tantara ity i Apple amin'ny fotoana anaovana azy dia tokony hanomboka mieritreritra ny fomba fiasa miaraka amin'ny orinasan-doka teknolojia ilay goavambe fa tsy manandrana manjakazaka aminy.